Ungayisebenzisa Kanjani i-Bypass activation Lock ku-iPhone
Ungakudlulisa Kanjani Ukukhiya ku-iPhone
Kugcine ukubuyekezwa ngoSepthemba 25, 2020 nguJack Robertson
Ukususa noma ukudlula ukusebenzisa i-Lock, kufanele sazi ukuthi yini okokuqala. Ngemuva kwalokho, sizogxila kwezinye izindlela ezingenzeka.
Yini i-Activation Lock
Indlela 1 Susa Ukwenza kusebenze ukukhiya nge-Apple ID nephasiwedi
Indlela yesi-2 Susa ukukhiya kokuqalisa ngePhasikhodi Yesikrini
Indlela ye-3 Bypass Activation Lock nge-Tenorshare 4Mekey ngaphandle kwephasiwedi nomnikazi wangaphambilini
I-Activation Lock iyisici sokuphepha esakhiwe yi-Apple Inc. ukuvikela i-iDevice ekulahlekeni nasekuntshontshweni. Kukhiywa i-Activation Lock idalwe yiseva ye-Apple ngokusebenzisa i-Apple ID ebhalisiwe ngaphansi kwezimo ezi-2 ezilandelayo:
I-iPhone ilahlekile noma yebiwe nge Thola i-iPhone yami kunikwe amandla.
Umnikazi we-iPhone angavele futhi anike amandla ngesandla ukukhiya kudivayisi nge-iCloud lapho idivayisi ilahlekile noma intshontshwa. Noma ngubani othola noma entshontsha i-iPhone akakwazi ukufinyelela kuyo noma ayisebenzise ngokujwayelekile, ngoba ilokhi ingaxazululwa kuphela ngokufaka i-Apple ID nephasiwedi ebhalisiwe.
I-iPhone iyi setha kabusha ngokuphelele.
Kodwa-ke, uma umuntu esetha kabusha i-iPhone ngohlelo olungelona olwe-Apple, i- I-Apple ID kungenzeka ihlale. Iseva ye-Apple izobona ukusethwa kabusha okungaphelele iphinde ichaze njengesenzo esingagunyaziwe, ngaphezu kwalokho, Iseva ye-Apple izonika amandla i-Activation Lock ngokuzenzakalela ngokusebenzisa i-ID ye-Apple esele.
If you’ve received a used iPhone with Activation Lock, you can cela umnikazi wangaphambilini ukuthi ayisuse kwakho.
Ngenhlanhla, umnikazi useduze, mnike idivayisi bese umcela ukuthi abhale i-ID ne-password. Ngemuva kokususwa kwe-Activation Lock, cela umnikazi ukuthi akusayinele i-Apple ID, uye kuyo Settings > Apple ID ithebhu, ne- thepha ukuphuma.
Noma, umnikazi ukude nawe, ungamcela ukuthi avule i-iPhone nge-iCloud. Ungakhombisa lezi zinyathelo ezilandelayo kumnikazi.
Isinyathelo 1 Ngena ngemvume iCloud.com
Faka i-ID yakho ye-Apple nephasiwedi ukungena ngemvume ku-ICloud.com.
Isinyathelo 2 Sula idivayisi
Ku-ICloud.com, iya ku- Amadivayisi, bese uchofoza kusithonjana sedivayisi. Khetha Sula i-iPhone.
Isinyathelo 3 Susa idivayisi ku-akhawunti ye-Apple
Ngemuva kokuthi i-iCloud isula idivayisi, chofoza Susa ku-Akhawunti.
Ngemuva kwezinyathelo ezi-3, umnikazi wangaphambilini angakusiza ukuvula idivayisi ukude.
Yini okufanele uyenze lapho ungakwazi ukuxhumana nomnikazi?
Thatha zonke izinto ezingakwazi prove you’re the current owner kwe-iPhone, njenge irisidi, inombolo ye-IMEI noma inombolo ye-serial, bese uya esitolo se-Apple sendawo. I-Apple Store izosusa i-Activation Lock mahhala uma uzibonakalise ungumnikazi we-iPhone.
Indlela 2 Yokwenza Ukhiye Wokusebenzisa nge-Passcode Yesikrini
Uma kungenzeka wazi noma ukhumbule ikhodi yokudlula yesikrini esedlule ngaphambi kokuthi i-iPhone isethwe kabusha, ungasusa i-Activation Lock nge ikhodi yokudlula yesikrini esedlule.
Isinyathelo 1 Amandla ku-iDevice
Khipha i-iPhone ene-Activation Lock, iyivule.
Isinyathelo 2 Vula ngephasikhodi edlule
Uma kunguwe osetha kabusha i-iPhone ngohlelo olungelona olwe-Apple, ungasusa i-Activation Lock nekhodi langaphambilini lokukhiya isikrini.
On the Activation Lock screen, you’re supposed to see an option “Vula Ngekhodi Lokudlula“. This is an option for those who forget their password and happen to remember the screen passcode to unlock the iPhone.
Thepha inketho, faka iphasikhodi yesikrini idivayisi ebikade inayo ngaphambi kokusetha kabusha. Ngemuva kwalokho, ukukhiya kuzoxazululwa, futhi ungathola ukufinyelela kabusha ku-iPhone.
Ungafaka futhi kwisoftware yomuntu wesithathu ukweqa i-Activation Lock. Njengamanje, kunezinhlelo ezimbalwa kuphela ezisiza ukweqa i-Activation Lock, I-Tenorshare 4Mekey ungomunye wazo.
I-4Mekey izokwephula ijele kudivayisi yakho futhi ngemuva kwe-jailbreak, iBypasser izoqala ukunqamula ukuxhumana phakathi kwe-iPhone neseva ye-Apple.
Ngale ndlela, i-Activation Lock izovinjelwa futhi ungasebenzisa i-iPhone ngokujwayelekile.
Isinyathelo 1 Landa i-4Mekey ku-Windows yakho
Isinyathelo 2 Qalisa isoftware
Yivule, chofoza Qala, futhi i-4Mekey izokhombisa ubungozi bokudlula ku-Activation Lock, umkhaza NGIFUNDILE NGAVUMA ISIVUMELWANO when you’re OK with the consequences.
Xhuma i-iPhone yakho kwi-PC yakho ngentambo ye-USB.
Chofoza Isifundo seJailbreak ukufunda umhlahlandlela wesinyathelo ngesinyathelo sendlela ongayibopha ngayo i-iPhone yakho.
Isinyathelo 4 Dula Ukuvula Isikrini
Uma uqeda ukwephula ijele kudivayisi yakho, chofoza Qala ukususa ku-4Mekey. izoqala ngokushesha ukudlula isikrini se-Activation Lock.
Inqubo izothatha isikhashana kuphela ukuqeda.
Lapho inqubo isiqedile, chofoza Kwenziwe, i-Activation Lock ku-iPhone yakho izokhutshazwa. Manje usungasetha i-iPhone yakho bese uyisebenzisa.
Lapho ilokhi idlulwa, i-iPhone ayisakwazi ukuthola nokusebenzisa i-SIM khadi, ngakho-ke, wena ayikwazi ukusebenzisa i-iPhone ukushaya izingcingo noma ukuthumela imiyalezo. Kepha usengaxhuma idivayisi yakho kufayela le- WiFi inethiwekhi.
Lapho inqubo isiqedile, ungakwazi ngena ngemvume ku-ID yakho ye-Apple ku-App Store naku- izinhlelo zokusebenza zokulanda. Kodwa wena ayikwazi ukusebenzisa i-iCloud.
Isikrini sokukhiya esisebenzayo sizovela futhi uma usetha kabusha idivayisi yakho ngemuva kokudlula. Ungasebenzisa i-4Mekey ukudlula futhi.
Ukhohlwe Iphasikhodi Yokuvinjelwa
Susa i-iPhone Screen Time Password
Setha kabusha ikhodi yokudlula ye-iPhone